Iyiphi isofthiwe engcono kunazo zonke yokudayisa inthanethi yebhizinisi lakho le-Amazon?
Wonke umuntu uthanda ukwenza imali, futhi i-Amazon inikeza wonke amathuba okukwenza. Yingakho ibhizinisi elihamba phambili e-Amazon livame kakhulu ezinsukwini zethu. Amabhizinisi amaningi e-ecommerce aqala imikhiqizo yawo e-Amazon eyenza le ndawo ibe yincintisana kakhulu. Ngaphezu kwalokho, i-Amazon idinga ukulandela imihlahlandlela yokusebenza eyisisekelo ukwenza imikhiqizo yakho ibonakale ekusesheni.
Uma usanda ku-Amazon, kungaba nzima kuwe ukuthola ukucinga kwe-TOP kwe-Amazon ngaphandle kokusebenzisa noma iyiphi i-software ye-Amazon. Kulesi sihloko, sizoxoxa nge-software engcono yokuthengiswa kwe-intanethi kulabo abangathanda ukuthengisa e-Amazon njenge-pro.
Izizathu eziyinhloko okudingayo ukusebenzisa i-software ye-Amazon
Ukuze wenze inzuzo enkulu, udinga ukutshala kuwe. I-Amazon imayelana nokutshalwa kwezimali okuphambili, kokubili isikhathi nemali. Uma ufaka lezi zici emsebenzini wakho, uzothola inzuzo engalingani njalo ngenyanga. Nokho, sidinga njalo ngaphezulu; yindlela umhlaba osebenza ngayo.
Kukhona amahora angu-24 kuphela ngosuku, futhi ngisho nabathengisi be-Amazon badinga ukulala. Ngakho-ke, uma ukuphatha zonke izinto ngokwakho, usengozini ukuze ulahlekelwe wena emsebenzini wakho. Cabanga ukuthi udinga ukwenza ucwaningo, ukukala, ukulandelela nokuhlaziya ngokwakho, ngokuqhathanisa idatha eminingi ngesandla. Futhi kuthiwani mayelana nokupakisha nokuthumela amakhulu ama-oda ngosuku? Cha, akunakwenzeka ngempela. Ama-Amazon angenza ukuphila kwakho kube lula ukukuhlinzeka ngokugcwaliseka kobuchwepheshe. Kusho ukuthi konke ukuthumela kwakho, ukuletha nokusekela izinkinga kuzophathwa yi-Amazon. Ungathumela imikhiqizo ezindaweni zokugcina izinto futhi ugxile kuphela ekugcineni ibhizinisi lakho le-Amazon. Kodwa-ke, yingxenye nje yempi. Yonke ibhizinisi idinga ukukhula, ngakho-ke udinga ukutshala ingxenye enkulu yosuku lwakho lokusebenza kuze kuthuthukiswe ibhizinisi lakho. Udinga ukusebenza kuhlu lwakho, ukucinga amagama angukhiye amasha, ukulandelela izikhundla zomkhiqizo ku-Amazon SERP, ukuqala izinto eziningi nokuthuthukisa izinsizakalo zenkxaso yamakhasimende ukukhulisa ukuqwashisa kwebhizinisi lakho nokukhulisa imali. Futhi konke lokhu kuthatha isikhathi esiningi nemizamo. Ngakho udinga amanye amasevisi azosiza ukukuphatha zonke lezi zinto. Khumbula, ukuthi udinga ukusebenza ebhizinisini lakho, hhayi kulo. Njengomthetho, abathengisi abayala ingcebo enkulu, bonke ngaphandle kokuthinta umkhiqizo noma isixwayiso mayelana nemininingwane encane.
Ngakho, kufanele ube nezinhlobonhlobo zokuthuthukiswa kwebhizinisi lakho le-Amazon. Ungasebenzisa abahlaziyi basekhaya kanye nochwepheshe be-SEO noma bathembele ku-software yokuzenzakalela ne-Amazon. Kepha mina, ukukhetha kuyabonakala. Ukusebenzisa amathuluzi e-intanethi, uzokwazi ukwenza konke ngokufanele ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado. Isihluthulelo sempumelelo yakho ye-Amazon. Ngakho-ke, ake sixoxe ngokufaneleka kwe-Amazon nokwenza ucwaningo lwesofthiwe oluzosiza kakhulu wena nentuthuko yakho yebhizinisi le-Amazon.
I-software engcono kakhulu ye-Amazon ye-gradeings yakho yokuthuthukiswa
Udinga ukuqala umdlalo wakho we-ecommerce njengomuntu onqobayo. Ngakho-ke, kubalulekile ukukhetha i-niche yemakethe enenzuzo kunazo zonke nemikhiqizo oyodayisa. Ukwenza lo msebenzi kube lula, ungasebenzisa ithuluzi le-Jungle Scout. Leli thuluzi lizokusiza ukuthi uthole imikhiqizo ye-Amazon ongayithola kuyo, ngokushesha futhi ngaphandle kokuqagela. Ukusebenzisa ithuluzi le-Jungle Scout, uzonciphisa ingozi futhi ukwandise inzuzo njengoba kusiza ukuthola amathuba asekelwe yi-data ethembekile kakhulu yokuthengisa yakwa-Amazon embonini futhi ugweme amaphutha amakhulu. Lolu hlelo lokusebenza lwewebhu lunikeza uhlelo lokuhlunga isiko lokusesha imikhiqizo ye-Amazon kanye nedatha enkulu yolwazi. Lapha ungakhetha izigaba, ukukhomba ama-Rankings amahle kakhulu we-Seller, ukuthengisa, ukubuyekezwa, njalonjalo.
Kunezindlela ezimbili ukuthi ungasebenzisa kanjani isofthiwe ye-Jungle Scout - njengohlelo lokusebenza lwewebhu, noma njengesandiso se-Chrome.
Ukusebenzisa njengensiza yewebhu, uthola ithuba lokuthola amakhekhe nemikhiqizo ezuzisayo kuyo yonke ikhathalogi ye-Amazon. Lesi sandiso sikunikeza ithuba lokuhlunga yonke imininingwane ye-Amazon ngesigaba, intengo, ukuthengisa, namanye amamethrikhi ukukusiza ukuthi uthole izinto ezingaphunyiwe ongakwazi ukuzifaka.
Uma usebenzisa ithuluzi le-Jungle Scout njengesandiso se-Chrome, uzokwazi ukuhlola nokuqinisekisa imibono yemikhiqizo njengoba upheqa. Uzokwazi ukuhlola intengo yomkhiqizo ngamunye, ukuthengiswa okulinganisiwe, inani lokubukeza kanye nedatha eyengeziwe yokuqhathaniswa komkhiqizo onembile.
Phakathi kokungalungi kwalesi thuluzi, ngiyakwazi ukubalula okulandelayo okukhokhayo, isikhathi esivivinywa sezinsuku eziyisikhombisa kuphela hhayi idatha ephelele.
Uma une umbono wemikhiqizo ofuna ukuyithengisa, kufanele uthole imikhiqizo yomzimba. Ukuthola imikhiqizo nokuthola amasampuli kuyisimiso esingenakuvinjelwa esingenakuphuthelwa esigabeni sokuqala somkhankaso wakho wokuthengisa we-Amazon.Lo msebenzi uvame ukwesabisa, ikakhulukazi ngoba iningi labathengisi bangaphandle. Noma kunjalo, ukuthola umhlinzeki omuhle kungaba lula njengoba ucabanga. Ake sibhale amanye amathuluzi angakusiza ngalolu msebenzi.
i-Alibaba iyinhlangano yesikhulumi esidumile saseShayina lapho ungathenga khona ngobuningi. Iningi lezinto ezisekelwe lapha zenziwa e-Asia. Yingakho intengo yabo engekho ephakeme uma kuqhathaniswa nemikhiqizo eyenziwa e-US naseYurophu. Ngakho, i-Alibaba iyibheja yakho engcono kakhulu. Ekuboneni kokuqala, kubonakala kunzima, kodwa kufanele uqale. Okokuqala, udinga ukuhambisa izicelo zokuthenga, bese usesha iminikelo yomkhiqizo noxhumana nomphakeli nge-imeyili noma nge-Skype. Okokuqala, udinga ukucela amasampula emikhiqizo evela kubaphakeli abahlukene ukuze bakwazi ukuqhathanisa ikhwalithi. Kufanele uqaphele ukuthi abahlinzeki abaningi bangamakampani okuhweba angenza izinto zibe lula kodwa ezibiza kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kufanelekile ukuphawula ukuthi i-Alibaba iyinhloko ye-Aliexpress yama-sampuli ngokuhlukana okuncane kuphela emanani. Noma kunjalo, leli sayithi livumelekile kunamanye amapulatifomu okuhweba aseShayina.
Phakathi kokubambisana no-Alibaba, ngiyakwazi ukubalula okulandelayo:
Lezi zinto ezidingekayo zizokusiza ukuba uqale kahle. Nokho, ukukhiqiza ngokuvamile kuthatha isikhathi. Ngakho-ke, ungasebenzisa lesi sikhathi ngokuphumelelayo ngokuzinikela ekubhaleni ukudala nokwenza ngcono Source .